Nchịkọta Njem Ọchịchị Mba Nile | Kpọọ 91-993.702.7574 maka ntinye akwụkwọ
Ememme ezumike mba abughi ihe ndi mmadu ga-echichi ma o bu iche echiche; Otú ọ dị ka a ga-amalite, anyị na International Vacations Packages International. Oge ezumike na mba ọzọ nwere ike ịbụ nchekwa ebighi ebi. Ịchọgharị ebe dịpụrụ adịpụ, isoro ndị nkịtị nọ na obodo dị iche iche na-emekọrịta ihe, ịmalite ịmụ banyere ihe nketa ha, ịga ọrụ ebube dị iche iche nke mmadụ na-eme, na-eri nri nri mpaghara, bụ ihe dị ịtụnanya. Sand Pebbles International Ezumike njem nchịkọta na-ahapụ gị ịchọpụta nrọ gị. E nwere ihe ọ bụla na-echere ka a nyochaa ya. Ọ bụrụ na ị nọ na-eche echiche ịga mba ọzọ iji mụta ma chọpụta ọha na eze dị iche iche, mgbe ahụ echerela, dee akwụkwọ International International Tour Tour Package ugbu a! Na-enye onwe gị nku iji gaa na ala gị. Nye onwe gi ajuju site na ndu ndi na-adighi nma, choputa ihe kacha mma site na ntaneti njem nleta International. Pebbles Sand na-enye ụdị nchịkọta njem nleta mba dị iche iche na nke a haziri ahazi nke ga-edozi gị. Ọ bụghị naanị inyefe, a na-enyekwa gị ebe obibi dị jụụ nakwa dị ka ụzọ nlegharị anya na-eduzi ka i wee nwee ike ịnụ ụtọ ezumike gị n'ụzọ zuru ezu.
Iji nweta ịmalite nrọ maka oge ezumike ọzọ gị ọzọ, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke International Vacuum Travel Tour iji họrọ. Kwe ka anyị na-ejere gị ozi wee nye gị ezumike kachasị elu na ndị enyi gị na ezinụlọ gị.